ngomphathi ku 21-03-08
1. Uhlobo loKhetho lweenkuni Iimfama zinokuzisa i-rustic, classic, okanye imvakalelo yanamhlanje kwindawo. Zifumaneka kuhlobo lombala kunye nokukhethwa kwemvakalo, ezinje ngoqalo, ipayini, i-paulownia, i-bass kunye ne-beech, isenza ukuba kube lula ukufumana isitayile esifanelekileyo segumbi ozihombisayo. Ezi zimfama ziyala ...
Umgangatho wezinto zomthi wepaulownia ukhetheke kakhulu, ulunge kakhulu kuluhlu olubanzi lwezicelo. Xa kuthelekiswa neminye imithi, iPaulownia inezi mpawu zisi-8 zilandelayo: • Ikhaphukhaphu kodwa yomelele Njengomnye wemithi ekhaphukhaphu emhlabeni, ilula nge-40% kunamanye amahlathi. Kwi...
Inkampani yethu iya kuthatha inxaxheba kwi-Shanghai R + T Curtain Exhibition
2017.2.20 Ukususela Matshi 19 ukuya Matshi 21, 2017, inkampani yethu iza kuthatha inxaxheba Shanghai R + T Curtain Exhibition, umnquba inombolo N5G61, abahlobo bamkelekile ukuba batyelele kunye nesikhokelo. 2019.2.15 Ukususela ngoFebruwari 27 ukuya Matshi 1, 2019, inkampani yethu iza kuthatha inxaxheba Shanghai R + T Curtain Exhibition, boo ...
ngomphathi ku 20-06-13
Iimfama zeenkuni ezenziwe ngomthi zenziwe ngeplastiki eyi-100% kwaye zijongeka ngathi zingumthi wokwenene. Ngapha koko, ekuphela kwento esinokubaxelela yona ngaphandle kukujonga isiphelo se-slats, ukubona ukuba kukho iinkuni. Zikwindawo eyi-100% engenawo manzi, oko kuthetha ukuba iimfama zeFaux Wood zihamba kunye nokulula kwazo ukuzicoca ...
Ngo-2020, ebusweni be-COVID-19
ngomphathi ku 20-04-16
Kwi-2020, ebusweni be-COVID-19, asikayeki ukuya phambili. Inkampani enkulu ifaka i-non-VOC yokusekwa kwamanzi kwimveliso yeemfama, into entsha kushishino lweemfama. Kwaye iimveliso zethu zinomsebenzi we-antibacterial, idlulile isiqinisekiso se-SGS.
Ukususela ngoFebruwari 27 ukuya ku-Matshi 1, 2019, inkampani yethu iya kuthatha inxaxheba kwi-Shanghai R + T Curtain Exhibition, inombolo yeminquba N5H79, abahlobo bamkelekile ukuba batyelele kwaye babakhokele.
ngomphathi ku 20-01-01
Ukususela ngo-Matshi 19-Matshi 21, 2017, inkampani yethu iya kuthatha inxaxheba R + T Curtain Exhibition, inombolo umnquba N5G61, abahlobo bamkelekile ukuba batyelele kwaye bakhokele.
ngomphathi ku 18-02-15
Olu tyalo-mali luya kusinceda kubaxumi bethu. Ukubonelela ngenkonzo engcono.
ngomphathi ku 17-02-20
Ngophuhliso oluqhubekayo lwenkampani, abathengi bethu bayaqhubeka nokwanda. Ngo-2019, isikali sethu semveliso yocweyo sandiswa ukusuka kwi-6000 yeemitha zesikwere ukuya kwi-15000 yezikwere. Kwangelo xesha, songeze izixhobo zemveliso ezintsha. Olu tyalo-mali luya kusinceda kubaxumi bethu. Imveliso ...